Shaqaalaha Apple waxay Kuuriya Ku Wareysteen Soo -saarayaasha Qaybaha Gawaarida ee Kala duwan | Waxaan ka imid mac
Muddo ka dib markii ay jireen warar xan ah oo joogto ah oo ku saabsan mashruuca Apple CarWaxyaabaha ayaa degay waxayna u muuqatay in fikradda baabuurka loogu talagalay California oo la soo saaray oo garanaya meesha, la dhigay. Waa hagaag, ma ahaan doonto, maantana waxaa soo baxay war ka hadlaya arrintaas.
Waxay u muuqataa in dhowr shaqaale Apple ah joogtay Kuuriya la shirar la yeelanaya soo -saarayaasha kala duwan ee dalkaas ee qaybaha baabuurta. Mid iyaga ka mid ah, soo -saare baytariyada baabuurta korontada ku shaqeeya. Markaa Cupertino waxay ku sii qaldamaan khaladkaas fikradda ah samaynta Baabuurka Apple.
Sida la wariyey Korea Times, Apple ayaa wadahadalo la bilowday dhowr shirkadood oo wax soo saara si gawaarida korontada, iyo dhowr ka mid ah shaqaalaheeda ayaa booqday xarumaha soosaarayaasha gawaarida ee Kuuriyada Koonfureed.
Maqaalku wuxuu sharxayaa in soo -saareyaashani ay yihiin LG, SK Innovation, Hanwha iyo Magna International, iyo in kulamadani ay ahaayeen xiriirkii ugu horreeyay ee ku saabsan iskaashi suuragal ah oo ku saabsan soo saaridda baabuur koronto ah oo loogu talagalay Apple.
Hal -abuurka SK waa soo saare weyn oo Kuuriya ah oo soo saara bateriyada baabuurta korontada, oo ka tirsan SK Group. Magna International, waa soo -uruuriye baabuur oo muhiim ah, oo dhirtu ku baahsan tahay meeraha oo dhan, taasina waxay u heellan tahay soo -saaridda baabuurta shirkadaha baabuurta ee kala duwan, laga bilaabo Porshe, BMW, ama General Motors, si aan u xusno dhawr.
Wax yar ayaan ka ogaan doonnaa kulamadan, maadaama Apple ay doonayso inay mashruucdeeda Apple Car ku siddo qarsoodi ugu sarreeya. Hyundai hore u hubiyay dhawr bilood ka hor sida Apple u kharash garayso. Waxay lahaayeen xiriiro hore oo ku saabsan mashruuca, shirkadda baabuurka ayaa u sharraxday afarta dabaylood, Apple ayaa xanaaqday oo xiriirkii jartay.
Markaa shirkadaha soo socda ee ka shaqeynaya mashruuca la sheegay, wax badan ayaa ka badbaadi doona inay daabacaan wax ku saabsan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » Shaqaalaha Apple ayaa Kuuriya kula kulmay shirkado kala duwan oo sameeya gawaarida
Waxaa jiri doona dukaan Apple ah oo ku yaal Hindiya laakiin furitaankiisa ayaa dib u dhacay masiibada awgeed